iQ Vision (Nay Pyi Taw) - Myanmar Classifieds, Hotels in Myanmar, Resturants in Myanmar, Jobs in Myanmar
iQ Vision (Nay Pyi Taw)
Iq vision ( ကွျောငွာအားလုံးကွညျ့ရနျ )
မျက်လုံးခွဲပြီးထည့်ရသည့် မှန်ပါဝါကို တိုင်းတာပေးခြင်း။
မျက်လုံးကို Ultrasount ရိုက်ပေးခြင်း။
မျက်လုံးခွဲပြီးမှ အမြှေးပါးထူ၍ လေဆာပစ်ခြင်း။
ဆီးချိုကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိရောဂါကို လေဆာပစ်ခြင်း။
ဆီးချိုကြောင့် မြင်လွှာထိခိုက်လာချိန်တွင် လေဆာပစ်ခြင်း။
အမြင်လွှာ တစ်လွှာခြင်းစီကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း။
အာရုံကြော ပျက်စီးမှုကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း။
မျက်လုံးသွေးကြောများကောင်းမကောင်းကို လေဆာမပစ်ခင် ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်း။
ဆီးချိုကြောင့် မျက်လုံးပျက်စီးမှုတိုင်းကို လေဆာမပစ်ခင် ပစ်မှတ်တိုင်းတာခြင်း။
အမြင်လွှာ၊ အာရုံကြော ပျက်စီးမှုရှိမရှိကို အသေးစိတ်တိုင်းတာခြင်း။
အရောင်ခွဲခြားနိုင်မှုရှိမရှိ (Colour Blind ) စစ်ဆေးခြင်း။
အမြင်လွှာ အာရုံကြောကောင်းမကောင်း Grad Line များဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
NIDEK (Japan) မှ ထုတ်လုပ်သော နောက်ဆုံးပေါ် Phaco စက်သစ်ကြီးက သင့်အမြင်စွမ်းအားကို အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ အကောင်းဆုံး မြှင့်တင်ပေးနေပါပြီ။
အတွင်းတိမ်ခွဲမည်ဆိုလျှင် အကောင်းဆုံး USA Made အတွင်းမှန် IOL Lens များကိုသာသုံးပါ။ ထိုမှန်များသည် Polishing ကောင်းသောကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်တတ်သည့် Fibrosis အမြှေပါးတက်ခြင်း အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးနိုင်ပြီး နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာ ကြည်လင်ပြတ်သားသော အမြင်အာရုံကို ရရှိစေပါသည်။ သူငယ်အိမ်စောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်လုံးကြွက်သား အားနည်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Baushch & Lomb မျက်လုံးအတွင်းမှန် IOL Lens က Center ကို ပြန်ရောက်အောင် ထိန်းထားပေးပါသည်။
အသိအမှတ်ပြုသောBrandedFrameများ၏ နောက်ဆုံးပေါ် ဒီဇိုင်းများကို အရည်အသွေးအစစ်အမှန်၊
ဈေးနှုန်းအစစ်အမှန်ဖြင့် လက်လီလက်ကား ရောင်းချပေးနေပါသည်။ အတုအပ လုံးဝမရောင်းပါ။
အိုင်ကျူဗွီးရှင်းတွင် ကမ္ဘာ့အပေါ့ပါးဆုံးမျက်မှန်များ၊ Excellence Titanium ကိုင်းများနှင့်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုသော BrandedFrame များ၏ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများကို အရည်အသွေး
အစစ်အမှန်၊ ဈေးနှုန်း အစစ်အမှန်ဖြင့် လက်လီလက်ကား ရောင်းချပေးနေပါသည်။အတုအပလုံးဝ
တစ်ခုသတိထားစေချင်တာက selection ကို ဆံပင်ရဲ့ အလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာတွေ (reflection) ကိုပဲ ရွေးထားပါတယ်။ ညာဘက်လည်ပင်း နားကဆံပင်တွေကိုမရွေးထားပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလင်းရောင်များတဲ့ဘက်သာလျှင် အရောင်ကူးပြောင်းရာမှိာသာဆုံးမို့ပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ Image>Adjustments>Hue/Saturation ကိုရွေးပါ (Ctrl + U)။ Saturation Dialog box မှာတော့ Colorize ဆိုတဲ့ Check box ကိုရွေးပေးပါ၊ Hue တန်ဖိုးကို 55 မှာထားပြီး Saturation ကို 60 မှာထားလိုက်ပါတယ်။ (မိမိ အသုံးပြုသောDocument နှင့် Color များပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်)။ OK ကိုနှိပ်ပါမယ်။
အိုင်ကျူဗွီးရှင်း တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သော မျက်ကပ်မှန်များ ....
· ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်သောမျက်ကပ်မှန်
· ရေဓါတ်59% ပါဝင်သောမျက်ကပ်မှန်
· ညအိပ်လျှင် ချွတ်စရာမလိုသောမျက်ကပ်မှန်
· ပါဝါပါသော ရောင်စုံမျက်ကပ်မှန်
တစ်စုံဝယ်လျှင် တစ်စုံလက်ဆောင် ပေးနေပါပြီ…
အိုင်ကျူဗွီးရှင်းတွင် ….... Cartier, Bvlgari, Prada, Ferragamo, Lineart, Z Titan, Lacoste,
Charmant Titanium Perfection, Ad-Lib, Tru-Trussardi, Coach,Burberry, DAKS,Versace,
D&G, Ray Ban, Puma, Esprit, DKNY, ELLE, Ralph Lauren, Aristar, Sisley, Nicole….etc.
စသည့်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Brand များ၏ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများကို နိုင်ငံတကာနှင့်အညီ
up to dateရောင်းချပေးနေပါပြီ။..
iQ Vision has 21 Branches available......
iQ Vision Head Office 16. iQ Vision (Junction Nay Pyi Taw)
iQ Vision (SSC Hospital) 17. iQ Vision (Thapyay Gone)
iQ Vision (SSC Women Center) 18. iQ Vision (Mandalay Diamond Plaza)
iQ Vision ( Pin Lon hospital) 19. iQ Vision ( Mandalay 80th Street )
iQ Vision (Superone (Kyeikkasan)) 20. iQ Vision ( Taungoo-1 )
iQ Vision (Taw Win Center) 21. iQ Vision ( Taungoo-2 )
iQ Vision (Junction Maw Tin) 22. iQ Vision ( Mawlamyaing )
iQ Vision (Junction Square)
iQ Vision ( Capital Mall)
iQ Vision (United Living Mall )
iQ Vision ( Bogalay Gamone Pwint)
iQ Vision (Ruby Mart)
iQ Vision (Nawarat Clinic)
iQ Vision (Victoria)
iQ Vision ( Htauk Kyant)
Nay Pyi Taw : Ziwakka Medical Shop Line,Tha Paya Gone Tsp; Nay Pyi Taw.
Ph: 098617471, 0973036606, 09428119546
Yangon : S (15),U Chit Mg Rd,Tamwe Tsp; Yangon.
Mandalay : No (271),80 Street,between 32&33 Street,Mandalay.
Email : iqvisionusa@gmail.com
Web : www.iqvisionusa.com
American Vision (Nay Pyi Taw )
Naypyitaw Office ♦Office (1) : ...
iQ Vision (Mandalay)
American Vision (Mandalay)
Mandalay Office Office (1) : &nb...
•Yangon Office ♦Office (1) : ...